पर्वत अस्पताल र बेनी अस्पतालमा निःशुल्क डायलाइसिस सेवा शुरु – Parbat News
१९ साउन, पर्वत । धौलागिरी क्षेत्रका दुई जिल्लामा एकै साथ निःशुल्क डायलाइसिस सेवाको शुरुवात भएको छ । यो क्षेत्रको पर्वत अस्पताल र वेनी अस्पतालमा एकै साथ मृगौला पिडितका लागि डायलाइसिस सेवाको शुरुवात भएको हो । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलको लक्षित कार्यक्रम अनुसार पर्वत जिल्लाको जिल्ला अस्पताल र म्याग्दी जिल्लाको जिल्ला अस्पतालमा यो सेवाको शुभारम्भ भएको छ ।
जिल्ला स्तरीय अस्पतालहरुमा यो सेवा नहुँदा मृगौला फेल भएकाहरुको डायलासिस उपचारका लागि ठूला शहरहरुमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । मृगौला डायलाईसिस सेन्टरबाट ६ जना स्टाफ नर्स २ जना मेडिकल अफिसर र १ जना प्राबिधिकले २४ सै घण्टा सेवा प्रदान गर्ने गरी दुवै अस्पतालले सेवा प्रवाहको शुभारम्भ गरेका छन । पर्वत अस्पतालमा गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रतिनिधि सभाका सांसद पदम गिरीको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबाट विनियाजीत बजेटबाट यो सेवाको शुभारम्भ भएको छ । भने, वेनी अस्पतालमा गण्डकी प्रदेश सरकारसंगै प्रवासी म्याग्देलीको सहयोगमा यो सेवाको शुभारम्भ भएको छ ।
वेनी अस्पतालमा ३ वेड सञ्चालनमा छन । एक दिनमा ६ जना विरामीले सेवा लिनसक्ने अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले जानकारी दिए । ६ वटा मेसिनबाट दुई सिप्टमा मात्रै १२ विरामीले दैनिक सेवा दिन सकिने भए पनि तत्काल दुई वटा पुरानो मेसिन भएकाले सञ्चालनका लागि हाल भने उपकरणको अभाव रहेको वेनी अस्पतालका प्रमुख डा. अमृत अधिकारीले बताए । म्याग्दीमा हालसम्म १५ जना मृगौला पिडित अस्पतालको सम्पर्कमा आएका छन ।
एता पर्वतमा भने करिब १ करोड ३० लाख भन्दा बढीको लागतमा संचालनमा आएको उक्त सेन्टरबाट दैनिक ६ जना विरामीको नियमित डायलाइसिस गर्न सकिने अस्पतालका अध्यक्ष गोविन्द पहाडीले बताए । हाल ४ वटा मेसिनबाट दुई सिफ्ट मात्रै १२ जना बिरामीलाई दैनिक सेवा दिन सकिने पनि पहाडीले भनाई छ । मृगौला पिडितहरुलाई जतिसक्दो भरपर्दो सेवा दिने गरी ब्यवस्थापन मिलाइएको अस्पतालका निमिक्त प्रमुख डा. शिशिर देवकोटा बताउँछन् ।
सहासिक खेल बञ्जि जम्पमा २० करोड लगानी